Nitsidika ny Anglisy Premier League By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Nitsidika ny Anglisy Premier League By Train
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 25/12/2020)
Fa dia lavitra izay hanjo ny ho liana amin'ny fanatanjahan-tena, eran'i Boligaria England Premier League for lalao dia mety ho manokana traikefa. Raha vitsivitsy mitsangana ny ekipa ka ho lavo hiala amin'ny fanekena isaky ny vanim-potoana, izay midika fa tsy mitovy in-droa misesy, Tsy azo atao mihitsy ny marina fa Namelatra ny manerana an'i Angletera sy Pays de Galles. Izany tokoa no mahatonga ny Premier League karazana voajanahary faritany haleha izy noho izany izay mety te-hijery ny firenena. Tafiditra indrindra tanàna malaza, ny sasany amin'ireo liana indrindra fanehoam- an-toerana kolontsaina, ary ny sasany tena marina kianja tsy mampino. Plus, ny mitaingina avy amin'ny tanàna iray any amin'ny manaraka dia afaka manome anao tsara tarehy Fahitana Momba ny British malaza ambanivohitra!
Marina ity karazana fitsidihana azo natao rehetra ny fomba isan-karazany, fa nomena ny Premier League dia ahitana 20 ekipa isaky ny vanim-potoana. Izany no zavatra iray santionany aza, ny lalana samihafa azonao atao sy ny tanàna, kianja, ary ny ekipa dia afaka mahita.
London ho Brighton
Tena tsara ny manomboka izao ny diany tany Londres noho ny antony roa. voalohany, fa ianao izay tena mety manidina ho any ihany. ary ny faharoa, fa maro an-trano ny Premier League fikambanana, izay midika fa ho tsara toerana mba hanomboka sy farany ny dianareo manome fitoerana ho tsara manodidina Grande-Bretagne. Afaka manomboka amin'ny kibay maro, nefa aho nahita fahazoan-dalana hidirana ao amin'ny Stamford Bridge Chelsea. Ny toerana dia tsara, amin'ny iray laharan'ny Premier League kianja filazana 140 taona ny tantara sy ny toetra toy ny singa izay mitandrina izany teo anivon 'ny tsara indrindra. Ary ny ekipa foana no fifaninanana (ary tokony ho 2018 ihany koa).
avy London, lojika iray lalana ny manomboka amin'ny atsimo dia an'i Brighton. Izany tena mitaingina haingana izay tapitra amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra Angletera ny tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny Brighton. London Victoria-peo, London Bridge Station, ary London St. Pancras-peo mivantana mitaingina rehetra, izay maka adiny iray mitovitovy.
Brighton ny Cardiff
Ary indray mandeha amin'ny Brighton, dia afaka maninjitra ny tongotra ka mandehana manodidina faritra sasany tena manokana. Ny tanàna Pier no malaza (ary tena voly noho ny rariny, toy ny rivo-piainana), ary misy vitsivitsy toeram-pivarotana sy trano fisakafoanana antitra mendrika ny distrika trandrahana. Football-hendry, ianao dia handeha ho any Falmer Stadium, izay iray amin'ireo vaovao ireo ao amin'ny ligy. Brighton & Hove Albion Tsy powerhouse an-tampon'ny nandositra ny baolina kitra anglisy, fa ny mpankafy dia mety ho liana sy lalao lehibe fomba mandany ny tolakandro na ny takariva ao amin'ny mafana tora-pasika tanàna ao amin'ny fararano.
Lille mankany London Train Eurostar
Antwerp mankany Londres Eurostar London
taorian'ny Brighton, ianao no mila manomboka circling ny andrefana, ary misy faritra vitsy safidy. Ianao afaka nankany Bournemouth na Southampton ao amin'ny atsimo andrefan'i, ohatra, toy ny tanàna roa manana Premier League ekipa. Fa tsara kokoa noho ny baolina kitra ny avaratra dia (ary toy izany koa ny tanàna, arguably), fa tsara indrindra ny manomboka mampihetsi-po ihany koa avaratra. Noho izany aho fahazoan-dalana hidirana sasin-tenin'ny Cardiff, Wales. Fiaran-dalamby avy any Brighton gara ny Cardiff Central afaka mihazakazaka amin'ny tokony ho efatra ny efatra-ary-a-tapany ora, na aiza na aiza avy amin'ny iray amin'ny telo fiovana. ny fiaran-dalamby ity lalana mihazakazaka mihoatra na latsaka ny andro.
Cardiff ho any Liverpool
In Cardiff, ianao no mahita Cardiff City tao Cardiff City Stadium, izay somary akaiky ny toerana ho an'ny ambaratonga ity. Ary raha tonga ny fotoana ny diany hijery lalao an'i Swansea fifandrafiana City, ianao ho an'ny tena Fifaliana. Tokony farany ho Somary mijanona haingana anefa teny an-dalana ho any amin'ny tanàna lehibe kokoa lavitra kokoa baolina kitra avaratra. ny telo- ny efatra ora fiaran-dalamby avy any Cardiff Central ho any Liverpool Lime Street no tolo-kevitra. Tena Somary tsy tapaka sy mahitsy lalana, matetika amin'ny iray na roa monja fiovana, ka mitondra anao tsara ao am-anglisy baolina kitra. Tsy lazaina intsony ny fiarandalamby mitondra anao tsara eny an-Cotswolds, tsara tarehy ny faritra voajanahary izany ny mpizaha tany attraction in ary ho azy.
Liverpool any Newcastle
In Liverpool, mety te-hanokana fotoana mba hijery, araka ny tena misy marina sy ny tanàna tena tsara. Fa ny baolina kitra no mbola tena manintona. Anfield, izay Liverpool milalao, dia fantatra ho any amin'ny tsara indrindra Premier League kianja, ary maro no mino izany mety ho ny taona fa ny ekipa mba hahazo indray Premier League voninahitra sy hisambotra ny tompon-daka. Izany fotsiny ny milaza fa ny kianja, efa fantatra amin'ny angovo, Tokony ho naresaka ho an'ny taona manaraka na mihoatra, ary mety tsara ho amin'ny tsara indrindra ho an'ny baolina kitra traikefa rehetra amin'ny UK.
avy ity teboka, misy safidy vitsivitsy. Raha ny fotoanareo dia voafetra, dia mety ho tsara raha maka ny tena fohy nankany Manchester alohan'ny loha niverina tany London. Raha misy ny fotoana, na izany aza, Fahazoan-dalana hidirana aho rehefa nandalo Manchester ary any avaratra, ny zavatra tokony ho mitovitovy adiny telo avy any Liverpool mitaingina Lime Street ho Newcastle. Afaka mahazo mivantana mitaingina, ary raha mijery izany toy ny lava indrindra mihinjitra ity drafitra rehetra eo amin'ny sarintany, fa tena tsy misy ratsy diany.
Newcastle any Manchester
St. James 'Park ao Newcastle mety ho ny nicest kianja ao amin'ny ligy, na dia tsy tena mitovy ny tantara ny toerana toy ny Anfield. Tena tsara tarehy, single tonga, ary ny anankiray izay misy dia afaka ny ho tena kely ny filan'ny nofo. Tokoa, mialoha vao haingana ligy fanokafam-, dia soso-kevitra mety hampahatezitra Newcastle Tottenham Hotspur noho ny vanim-potoana vaovao-Buzz amin'ny Tyneside sy ny fahavinirana sy ny finoana izay azo avy amin'io vahoaka io. Izany tezitra tsy tonga ho, fa izao no mbola mitondra aingam-panahy toerana mba hijery ny fanatanjahantena fa iray ihany no antony voalaza. Izany no mahatonga azy ho tena mendrika lalana miolankolan'ny.
Taorian'ny lalao haingana tany Newcastle, dia afaka misambotra ny fiaran-dalamby hiverina any Manchester, mety amin'ny ny tena andro iny ihany ny fandaharam-potoana, raha miasa avy. Newcastle Central Station any Manchester Victoria tokony ho ary roa-a-tapany ora nandeha tsy misy mihoatra ny iray fiovana.
Manchester any London
Misy ny safidy maro any Manchester, toy ny fanekena roa fanta-daza indrindra ekipa – Manchester City sy ny Manchester United – hiantso ny tanàna an-trano. Raha toa ianao any an baolina kitra indrindra ianao, ary tsy mampiasa azy io ho toy ny fitaovana ho tsara faritany haleha izy, tokony hiezaka ny misambotra ekipa roa ao anatin'ny iray Mandehana, Raha ny fandaharam-potoana mamela. Raha tsy izany, dia mety koa handrehitra ny vola madinika. Man Utd. Old Trafford ny dia manan-tantara kianja ary ny iray amin'ny mampino mpankafy; Ny Etihad Man City Stadium kokoa toe-of-the-kanto, ary City no ekipa tsara kokoa ny tara.
Raha vao ianao atao amin'ny Manchester fa malamalama, ary roa-a-tapany na adiny telo mitaingina lamasinina hiverina any London avy any Manchester Victoria na Manchester Piccadilly. Tamin'izany fotoana, ilay dia dia Wrap! Na dia azonao atao ny mampiasa ny fotoana sisa tavela tany Londres mba hahita ny iray amin'ireo fikambanana no tsy nahita tamin'ny fiandohan'ny ny dia. Araka ny voalaza, misy safidy tsara maro.
Moa ve ianao vonona ny hijery Train Travel sy mankafy baolina kitra ny sasany? ny tsara indrindra ho namany Sary Order Mampiofana ny tapakila dia Save A Train
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#baolina kitra #baolina kitra Train Travel traveltips
Tiavo amin'ny sarimihetsika rehetra, soccer sy mijery sarimihetsika, fanampiana ny hafa hanao izay saim-pantany manodidina an'ity tontolo ity. Rehefa manana fotoana malalaka aho dia tiako koa ny manoratra sy mizara ny eritreritro sy ny tantarako. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho